-शिबप्रसाद पौडेल :- सम्पूर्ण रास्ट्रवादी नेपालीमा गणतन्त्र दिवशको हार्दिक शुभकामना !
गणतन्त्र दिवसको संघारमा नेपाल सरकारले छुटेको भूमि समेटेर नेपालको बास्तबिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । प्राविधिक कारणले त्रुटिबस नेपालको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी छुटेकोमा नेपालले त्यसलाई सच्याउँदै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो ।
तत्कालिन समयमा ब्रिटिस ईण्डिया र पछि भारतीय शासकहरु समेतले नेपालसँग नक्सा कोर्ने प्रविधि नहुँदा सहमतीमा नक्सा बनाएका थिए । उक्त नक्सामा चुच्चे भागमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुनुपर्ने भएपनि बुच्चे नक्सा बनाएर उक्त भुभाग छुटाईयो । नक्सा निर्माणमै धोका दिएको भारतीय हर्कत तत्कालिन शासकहरुले भेउ पाउन सकेनन् वा सो समय नेपालले नै भोगचलन गरिरहेकाले पछि सच्याउने ठानेर गौण विषय माने । भारत चीन लडाईमा नेपालको उक्त भूभागसम्म आएका चिनिया सैनिकलाई टिंकर भंज्यांङ त कटाईयो तर जाली ईण्डियाले कालापानी तत्काल छाडेन । पछि हडपेर बसेको भूभागलाई आफ्नै दाबी गर्ने छिमेकी दुष्टराष्ट्र भारतले अहिले नक्सामै छापेको छ । जवाफमा आफ्नो भूमिलाई नक्सामा छापेर भारतीय विस्तारवादलाई जवाफ दिएको सरकार संविधानमा समेट्नबाट चुकेको छ !
गणतन्त्रको मुखमा भारतीय दवावमै चुकेको बताईरहँदा सरकार अनि सबैदलका नेतालाई यो गणतन्त्र दिवशले आफ्नो भूमि फिर्ता सहित नक्सालाई संविधानकृत गर्न शक्ति र सद्बुद्धि प्रदान गरोस् कामना ! बास्तबिक नक्सा बनायर नेपाल सरकारले नेपाली संग पाएको बिस्वास र भरोसालाई एथाबत रख्न सकोस।जय गणतन्त्र दिबस🙏धन्यवाद !